Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha LAN Cable | Shiinaha LAN Cable Factory
Fiilooyinkan UTP LSZH waxaa loogu talagalay inay soo bandhigaan heerar heer sare ah oo salka ku haya waxqabad xaqiijinaya baaxadda ugu fiican ee codsiyada shabakadda xawaaraha sare leh ee maanta. Xarigga waxaa loogu talagalay in lagu taageero barnaamijyada isku xirka jiifka ee masaafo dhan 100 mitir. Koodhka midabka lammaanaha ah Labadalaab 1: Caddaan / Buluug, iyo Buluug Buluug 2: Caddaan / Liin dhanaan, iyo Khudaar 3 ah: Caddaan / Cagaar, iyo Cagaar Bixinta 4: Caddaan / bunni, iyo bunni Codsiga ● Waxay taageertaa qaybta 6A ee shabakadaha soconaya illaa 500 MHz Codsiyada ● Joogtada iyo lafdhabarta ...
Astaamaha 1. Waxay qaadataa wax tayo sare leh oo la soo dhoofiyay oo laga soo dhoofiyo maaddada naxaasta leh ee leh iska caabin yar iyo awood gudbinta calaamado adag. 2. Maqaar cusub oo dhumuc leh, cufan oo laablaabma una adkeysta, ayaa ka hor taga gabowga. 3. Guntimaha gudaha ee cufnaanta badan ayaa u adkaysta daxalka oo leh ductility wanaagsan. Faahfaahinta Cable nooca CAT6 Nooca gaashaaman UTP Waxyaabaha xarkaha galka PVC / LSZH heerkulka shaqeynaya -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) Midabka Kabaha Caan dhigista heerka 1Gbps Cable dherer 305M / vol ...
Ethernetkan 'UTP Lan Cable CAT5E Ethernet' wuxuu ku qalabaysan yahay nidaam horumarsan, kaas oo leh adeeg adeeg dheeri ah. Marka loo eego halbeegga Ethernet ee ay dejisay IEEE, aag guud oo maxalli ah oo loo adeegsado xiddig topology ah ayaa ku habboon labada lamaane ee qalooca. Intaa waxaa sii dheer, waxay garaysaa shaqada si wax ku ool ah looga hortago saameynta faragelinta elektromagnetic, sidaa darteed nidaamka fiilooyinka ayaa had iyo jeer ilaaliya iswaafajinta elektromagnetic-ka iyo waxqabadka gudbinta. Kaalay qalab tayo sare leh, th ...